Vaovao - Torolàlana ho an'ny mari-pana fahandro farafahakeliny azo antoka
Ny "loko, ny fofona ary ny tsiro" no antony voalohany heverin'ny olona rehefa mifidy sakafo. Ny loko sy ny hanitra ary ny tsiro matetika dia mamaritra ny fomba fahandroan-tsakafo. Ny "Tatitra Fikarohana momba ny sakafo hohanina voalohany" navoakan'ny Ivotoerana Hong Kong momba ny fiarovana ny sakafo dia nanambara fa ny foibe dia nandefa karazana santionana legioma 22 tany amin'ny laboratoara, tamin'ny fampiasana fatana fampidirana herinaratra 1200 W sy 1600 W, tsy nisy menaka fandrahoan-tsakafo, sy ny fotoana dia 3 minitra sy 6 minitra. Hita fa arakaraka ny faharetan'ny fotoana fandrahoan-tsakafo sy ny haavon'ny hafanana no vao mainka mivoaka ny acrylamide avy amin'ny legioma. Ny valin'ny fitsapana ny fanampiana menaka azo hanina amin'ny fanendasana sy ny fanendasana maina dia mitovy.
Sakafo samihafa no andrahoina amin'ny fomba samihafa. Hitan'ny fandinihana fa ny fomba fitahirizana sakafo, ny fomba fandrahoana sakafo, ary ny hafanan'ny fihinanana dia misy fiantraikany amin'ny sakafo mahavelona.
Rehefa mahandro amin'ny 60 ~ 80 ℃ dia mora ny manimba ampahany amin'ny vitamina legioma. Rehefa mangotraka ny lasopy dia tsy tokony andrahoina mandritra ny fotoana lava ny legioma ao anaty lasopy. Ny tsara indrindra dia ny miandry ny lasopy mangotraka dia atsofoka avy hatrany ny legioma. Ny hena no matsiro sy malefaka indrindra amin'ny 70 ~ 75 ℃; ny akoho amam-borona manontolo dia tsy maintsy hafanaina hatramin'ny 82 ℃ mba ho masaka tanteraka ny hena matevina; ny hena voatoto no mora miparitaka amin'ny bakteria mandritra ny fanodinana, noho izany dia tsy maintsy farafahakeliny 71 ℃ hiantohana ny fiarovana ny sakafo. Rehefa endasina ny hazan-dranomasina dia tokony ho 90 the ny maripana, ary 70 ℃ ny maripana anaovana azy, amin'izay tsy mafana loatra ary manandrana ny matsiro indrindra.
Ankoatra ny maripana mahandro, ny mari-pana amin'ny fotoana fisakafoanana dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fahasalamana koa. Ny hafanan'ny fihinanana dia tsy tokony ho mafana loatra. Ny fihinanana sakafo mafana mandritra ny fotoana maharitra dia mety handoro ny mucosa esofagaly hatrany, ka hamboarina mandritra ny fotoana maharitra. Mora ny mitaona homamiadana rehefa mandeha ny fotoana. Mampiseho ny angona fa amin'ireo marary voan'ny homamiadana esofagaly dia maherin'ny 90% no maniry ny sakafo mafana sy zava-pisotro mafana. Ny fihinanana sakafo mangatsiaka sy hatsiaka mandritra ny fotoana maharitra dia miteraka fihenan'ny lalan-dra mahery amin'ny làlam-pandevonan-kanina, izay misy fiantraikany amin'ny fandevonan-kanina sy ny fitrohana, izay miteraka fanaintainana amin'ny vavony maharitra, fanaintainan'ny kibo, fivalanana ary tsy fahampian-tsakafo mandritra ny fotoana maharitra. Amin'ny ankapobeny, ny maripana tsara indrindra amin'ny sakafo dia tokony ho akaikin'ny hafanan'ny vatana.
Araho ny torolàlana etsy ambany naroson'ny foodafety.gov ho an'ny mari-pana fandrahoana farafahakeliny sy fotoana fialan-tsasatra ho an'ny hena, akoho amam-borona, hazandranomasina, ary sakafo masaka hafa. Aza hadino ny mampiasa athermometer sakafo hijerena raha tonga amin'ny mari-pana anatiny azo antoka ny hena izay mafana mamono ny mikraoba manimba izay miteraka fanapoizinana ara-sakafo.
Fantatray fa mikarakara ny mpanjifanao ianao tahaka ny fikarakaranao anao, izany no antony anomezanay anao ny fitaovana thermomera an-dakozia namboarina tsara indrindra manompo ny filan'ny mpanjifanao rehetra izay azonao na tsy eritreretinao. Mifandraisa aminay ho an'ny thermométer sakafo tsara indrindra / thermomèter hena / thermometer BBQ.
Fotoana fandefasana: Jun-16-2021